२०७८ जेठ २९ शनिवार, चन्दननाथ नगरपालिका (जुम्ला)जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका – ७ खलङ्गा बजारसँग जोडिएको मिचागाउँमा कोरोना सङ्क्रमित बढेपछि सील गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा समितिको बैठक निर्णय अनुसार शुक्रबार बेलुका देखि सील गरेको हो ।
२०७८ जेठ २५ मंगलवार, नाम्खा गाउँपालिका (कर्णाली प्रदेश)शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आधार नेपालले जिल्लाका दुई स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ । कोरोना कहरमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको संस्थाका संयोजक कञ्जोक लामाले जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ जेठ २४ सोमबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । अपराह्न २ः०० बजे प्रदेशसभा भवनमा बोलाइएको अधिवेशन प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
२०७८ जेठ २३ आईतबार, भेरी नगरपालिका (जाजरकोट)निर्माण शुरु गरेको नौ वर्षसम्म अझै भेरी नदीमा पुलको जगसम्म निर्माण हुनसकेको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको भेरी नदीको पुल रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जोड्नका लागि निर्माण हुन लागेको हो ।
२०७८ जेठ २३ आईतबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रदेश सरकारले एक मन्त्रालय थप गरेसँगै खाली भएका दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।
२०७८ जेठ २० बिहीबार, भगवतीमाई गाउँपालिका (दैलेख)भगवतीमाई गाउँपालिकाले पालिकालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत उन्नत भैँसीपालन कार्य शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले अहिले उन्नत भैँसी र जर्सी गाई खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको छ ।
२०७८ जेठ २० बिहीबार, तातोपानी गाउँपालिका (जुम्ला)जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–६ रावतबाडा गाउँ एक साताका लागि सिल गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणले गाउँ नै प्रभावित भएपछि एक साता सिल गरिएको हो ।
२०७८ जेठ १८ मंगलबार, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका (डोल्पा )उपल्लो डोल्पामा कोरोना जस्तै लक्षण मिल्ने बिरामीको सङ्ख्या बढेको डोल्पो जनजाति विकास केन्द्रले जनाएको छ । उपल्लो डोल्पामा पर्ने डोल्पोबुद्ध,छार्काताङ्सोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका स्थानीयवासी ज्वरो र रूघाखोकी लागेर धमाधम बिरामी पर्न थालेका छन् ।
२०७८ जेठ १६ आईतबार, सिमकोट गाउँपालिका (हुम्ला)हुम्लाको जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिने भएको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई आगामी आर्थिक वर्षमा जोडिने जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ जेठ १५ शनिबार, काठमाडौं - संघीय सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसको उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्दै एक थान ल्यापटप खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई सहयोग पुग्ने गरी ल्यापटप खरिदमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको हो ।
२०७८ जेठ १४ शुक्रबार, चन्दननाथ नगरपालिका (जुम्ला)कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर व्यापकरुपमा फैलिएपछि सङ्क्रमितका लागि जुम्लाका स्थानीय तहले अक्सिजनसहितका कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यहाँका सात गाउँपालिकाले अक्सिजनसहितको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन् ।
२०७८ जेठ १४ शुक्रबार, जुनिचाँदे गाउँपालिका(जाजरकोट)दुई हप्ताभन्दा लामो समयसम्म स्वाब परीक्षणको नतिजा नआउँदा कोरोना फैलिएको भन्दै जिल्लामा पिसिआर मेसिन खरिद गर्न लागिएको छ । मेसिन खरिद गर्न सबै पालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने र अपुग भएमा प्रदेश सरकारसँग रकम माग गरी पिसिआर मेसिन खरिद गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ जेठ ९ आइतबार, कर्णाली प्रदेशनयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीले मुलुकमा कृषि, पूर्वाधार विकास, आर्थिकलगायतका विभिन्न क्षेत्र जस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि यतिबेला ठप्प छ । विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय सम्पूर्ण बन्द छन् ।
२०७८ जेठ ७ शुक्रवार, कुशे गाउँपालिका (जाजरकोट)गाउँभरि घरैपिच्छे बिरामी हुँदा सर्वसाधारण हैरान भएका छन् । जिल्लाका सबै पालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ ।
२०७८ जेठ ४ मंगलबार, दुल्लु नगरपालिका (दैलेख)दुल्लु नगरपालिका–१२ गौरीमा कोरोनाबाट एउटै समुदायका नौ जनाको मृत्यु भएको छ । वडामा कोरोना सङ्क्रमणबाट यति धेरैको मृत्यु भएको दैलेखमा पहिलो हो ।
२०७८ जेठ ३ सोमबार, अदानचुली गाउँपालिका ( हुम्ला)कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका सबै सेवा तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकामै परीक्षण गरिएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाका सबै काम अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सौमती ऐडीले जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ जेठ २ आइतबार, चन्दननाथ नगरपालिका(जुम्ला)चन्दननाथ नगरपालिकाकाले होम आइसोलेशनमा बसेका कोरोना सङ्क्रमितलाई कोसेली लिएर घरघरमा भेट्ने अभियान शुरुआत गरेको छ । अभियानमा नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवाल सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज पौडेल र स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख पृथ्वीनाथ योगी हुनुहुन्छ ।
२०७८ जेठ २ आईतबार, नलगाड नगरपालिका (जाजरकोट)कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नलगाड नगरपालिका–८ हल्चौरमा देवीलाई बलि (बोका) चढाइएको छ । शनिबार दिउँसो गाउँलेहरु जम्मा भएर कालिका माई देवीलाई बलि दिइएको स्थानीयवासी हरिबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।
धमाधम आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्दै जुम्लाका स्थानीय तह
२०७८ बैशाख ३० विहीबार, तिला गाउँपालिका (जुम्ला)कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर रोकथाम तथा सङ्क्रमणबाट बच्न जुम्लाका सात स्थानीय तह आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा जुटेका छन् । यहाँको तिला गाउँपालिकाले पाँच शय्याको अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ ।
२०७८ बैशाख २९ बुधबार, मुड्केचुला गाउँपालिका (डोल्पा)सरकारले अनुदानस्वरूप दिएको आयोडिनयुक्त नुन डोल्पाका छ स्थानीय तहका सर्वसाधारणले खान पाएका छैनन् । आयोडिनयुक्त नुनको ठाउँमा ढिके नुन नै प्रयोग गर्न बाध्य भएको यहाँका सर्वसाधारणले जानकारी दिएका छन् ।
२०७८ बैशाख २८ मंगलबार, जुम्ला (कर्णाली प्रदेश)जुम्लाको गुठीचौर एग्रो फार्मले स्याउ बगैँचामा प्रयोग गर्नका लागि यहाँका किसानबाट १८ लाखको गोठेमल खरिद गरेको छ । सबै किसानबाट १४ हजार डोका गोठेमल किसानबाट खरिद गरिएको एग्रो फार्मका सञ्चालक मीमबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
२०७८ बैशाख २६ आइतबार, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका (डोल्पा)शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको केन्द्र साल्दाङ डोल्पामा गत वर्ष मङ्सिरमा ठेक्का लागेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामल अहिलेसम्म पुगेको छैन । ठेक्का सम्झौता भएको छ महिना पूरा भइसक्दा पनि उपल्लो डोल्पामा चामल नपुगेपछि खाद्यान्न अभावको समस्या भोगिरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
२०७८ बैशाख २४ शुक्रबार, हुम्ला (कर्णाली प्रदेश)कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए जिल्लामा खाद्यान्न संकट पर्न सक्ने जनाउँदै जिल्लास्तरीय कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)ले बुधबारदेखि खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यका अध्यक्षतामा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकार पक्षको बैठकले हरेक दिन बढ्दो संक्रमणको अवस्था हेर्दा पछि स्थिति भयावह हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुन नदिन हवाई उडान जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७८ बैशाख २३ विहीबार, वीरेन्द्रनगर (कर्णाली प्रदेश)प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर केही महिना अघिसम्म धुलाम्य देखिन्थ्यो । साँघुरा सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डी, नालापेटी पनि फोहोर भरिएर बन्द ।
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार, तिला गाउँपालिका (जुम्ला)जुम्लाको तिला गाउँपालिका २ मा रहेको सबै ८५ घरधुरीले पुस्तौँदेखि भेडापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्  । गाउँपालिकाको मुकाम डुन्डेलीबाट ४५ मिनेट पैदलयात्राबाट पुगिने गाउँ तलबाट हेर्दा सबै पहाडैपहाडजस्तो देखिन्छ  ।
रोजगारीमा भारत गएका गाउँ फर्कदै, स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन अभाव
२०७८ बैशाख २० सोमबार, जुम्ला (कर्णाली(प्रदेश)विश्व महामारिको रुपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस (कोभिड) को संक्रमण दर नेपालमा पनि पछिल्लो समय भयाभय रुपमा देखिएको छ । संक्रमण दर उच्च गतिमा वढीरहेको भएपनि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको तथा समयमा नै पूर्व तयारी नगरेका कारण अकालमा सयौंले ज्यान गुमाउनु परेको आक्रोश समेत नागरिकमा देखिन थालेको छ ।
२०७८ बैशाख २० सोमबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको निर्देशनमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन भएको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा लामो समयदेखि जडान भई थन्किएको अक्सिजन प्लान्ट आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
२०७८ बैशाख १९ आइतबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण सुर्खेतमा जारी निषेधाज्ञामा खुला गरिएका अत्यावश्यक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पसलहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको संयोजकत्वमा शनिबार यहाँका औषधि पसल, खाद्यान्न पसल, तरकारी पसल, सब्जी मण्डीलगायत अन्य पसलहरुको अनुगमन गरिएको हो ।
२०७८ बैशाख १८ शनिबार, सिमकोट गाउँपालिका (हुम्ला)उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न सास्ती भएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण ७० वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँबाट सदरमुकाम सिमकोट पुगेर बैंक खाता खोल्न निकै समस्या हुने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
२०७८ बैशाख १८ शनिबार, जाजरकोट (कर्णाली प्रदेश)सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाइएसँगै जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा पुलको कामलाई गति दिइएको छ । जाजरकोट पासागाडबाट रिम्नासम्मको सडक पक्की गर्ने कामलाई तीव्रता दिनका लागि अहिले सडक फराकिलो बनाउने, ग्यावियन तारजाली राख्ने काम करिब सम्पन्न हुन लागेको छ ।
२०७८ बैशाख १७ शुक्रबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो लहरको ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि एक अर्ब बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमार्फत कोरोना महामारीको सङ्कटसँग जुध्न र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि रु एक अर्ब बजेट छुट्याउने तथा विकास बजेटबाट रकमान्तर गरी तत्काल रु ५० करोड कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ बैशाख १४ मंगलबार, जाजरकोट (कर्णाली प्रदेश)केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेपछि जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका गाउँमा सल्लीको दियालो विस्थापित हुँदै गएको छ । जाजरकोटका भेरी नगरपालिका, शिवालय र छेडागाड नगरपालिकाका अधिकांश वडामा ३३ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेसँगै गाउँले खुशी भएका छन् ।
२०७८ बैशाख १३ सोमबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था भयावह बन्न थालेपछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा एक सातासम्म निषेधाज्ञा जारी हुने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बन्दै गएका अवस्थालाई ध्यानमा राखी जिल्ला कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७८ बैशाख १२ आईतबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो प्रदेश विकास परिषद् बैठक आज बस्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक आज ११ः०० बजेबाट शुरु हुँदैछ ।
२०७८ बैशाख ११ शनिबार, सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै भवनको पहिलो पटक लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको शिलान्यास गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिमला केसीले सो भवनको शिलान्यास गर्नुभयो ।
२०७८ बैशाख १० शुक्रबार, बीरेन्द्रनगर (कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का जटिल बिरामीको सेवाका लागि सुगममा एम्बुलेन्स र दुर्गम जिल्लामा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)का संयोजक तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले कोभिडमा आइपर्ने सङ्कट व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा १० वटा एम्बुलेन्स भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने र विकटमा हेलिकोप्टरसहितको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७८ बैशाख ९ विहीबार, नाम्खा गाउँपालिका (हुम्ला)उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा वैशाख महिनामा हिमपात हुँदा यहाँका नागरिक अचम्भित भएका छन् । पुस, माघ र फागुन तीन महिना मात्रै हिमपात देखेका यहाँका नागरिकलाई वैशाख महिनामा हिमपात हुँदा जलवायु परिवर्तनले हिउँ परेको हो कि भन्ने लागेको छ ।
रारामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न होटल व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान पुर्याऔं
२०७८ बैशाख ८ बुधबार, छाँयानाथ नगरपालिका(मुुगुु)संसदीय समितिले मुुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालको सौन्दर्यलाई कायम राख्दै पर्यटक प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र विकास गर्न सरकारलाई सुुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हालै त्यस क्षेत्रमा गरेको अध्ययन भ्रमणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमाथि सुुझाव दिँदै सांसदले रारा पुुग्ने जो कोही मनोरम दृश्यबाट अति सन्तुुष्टि प्राप्त गरेपनि वसोवासका लागि होटल प्रबन्ध र सरसफाइको पाटो कमजोर रहेकै कारण भ्रमण फिक्का हुुन सक्नेतर्फ समयमै विचार पुर्याउन आवश्यक धारणा व्यक्त गर्नुुभयो ।
२०७८ बैशाख ८ बुधबार, तिला गाउँपालिका (जुम्ला)जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले सुनौलो हजार दिनभित्रका आमालाई उपाध्यक्षको पोषण कोसेली कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आमा र बच्चालाई स्वस्थ राख्न सके मात्र परिवार, समाज, समुदाय र सिंगो देशको विकास एवं समृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर सुनौलो हजार दिनभित्रका आमासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
२०७८ बैशाख ७ मंगलबार, कर्णाली प्रदेश (सुर्खेत)कर्णाली प्रदेशकोसामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई दिने निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीको अध्यक्षतामा बसेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन निर्देशन समितिको बैठकले सीमानाकामा रहेका सङ्क्रमित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा चैतेदशैँका लागि भोलि सार्वजनिक बिदा
२०७८ बैशाख ६ सोमबार, कर्णाली प्रदेश (सुर्खेत)कर्णाली प्रदेशमा चैतेदशैँका अवसरमा सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । चैत शुक्ल अष्टमीका अवसरमा प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
नयाँ जन्मिने शिशुलाई गाउँपालिकाले तीन हजार दिने
२०७८ बैशाख ६ सोमबार, पातारासी गाउँपालिका (जुम्ला)जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा नयाँ शिशु जन्मने बित्तिकै रु तीन हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ जन्मिएका छोराछोरी दुवैलाई उक्त रकम दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले बताउनुभयो ।
२०७८ बैशाख १ बुधबार, नलगाड नगरपालिका(जाजरकोट)डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति नलिई धमाधम रुखहरु काट्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ । सामुदायिक वन समूहको सिफारिसमा डिभिजन वन कार्यालयले टाँचा लगाएर नापजाँच गरेर मात्र रुख कटान गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वन हुनसकेको छैन ।
२०७७ चैत २९ आइतबार, पचालझरना गाउँपालिका(कालिकोट)कालिकोट जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका–८ मा आगलागी हुँदा छ घर जलेर नष्ट भएका छन् । शनिबार भएको आगलागी गाउँपालिका–८ खोलीबजार, भुराबगरमा आगलागीमा छ घर जलेर नष्ट भएका हुन् ।
२०७७ चैत २२ आइतबार, तिला गाउँपालिका(जुम्ला)जुम्ला तिला गाउँपालिका–९ ढिपुगाउँको मुल्लीमा आगलागी हुँदा ३५ घर जलेर नष्ट भएका छन् । पचहत्तर घर भएको मुल्लीमा ३५ घर जलेर नष्ट भइसकेको वडाध्यक्ष शेरबहादुर बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।
२०७७ चैत १९ बिहीबार, चौकुने गाउँपालिका(सुर्खेत)इपिएस प्रक्रियामार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया आएका सुर्खेत, चौकुने–४ बिजौराका गगन रावलको सोमबार राति निधन भएको छ । दक्षिण कोरियाको एजुसी भन्ने ठाउँमा कार्यरत गगन पहिलो कार्यकालको चार वर्ष १० महिना अवधि पूरा गरी अबको नौ दिनपछि नेपाल फर्किने टिकटसमेत काटेर तयारी अवस्थामा थिए ।
छेडागाडमा अस्पताल सेवा प्रारम्भ
२०७७ चैत १६ सोमबार, छेडागाड नगरपालिका(जाजरकोट)एक वर्षअघि छेडागाड नगरपालिका–७ का रामबहादुर कामीको हात जङ्गलमा घाँस काट्दै गर्दा लडेर भाँच्चियो । उहाँ करिब छ महिनाभन्दा बढी हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो ।
२०७७ चैत १५ आइतबार, ठुलिभेरी नगरपालिका(डोल्पा)कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि ठुलिभेरी नगरपालिका डोल्पाले ‘एक घर, एक बगैँचा’ कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नगरपालिकाको आफ्नो बजेटबाट यी योजना सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने भन्दै प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।
खाद्यान्न हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्न : नाम्खा गाउँपालिकाको माग
२०७७ चैत १४ शनिबार, नाम्खा गाउँपालिका(हुम्ला)हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्नको समस्या हुने देखिएपछि हालसम्म ढुवानी हुन नसकेको कोटाको खाद्यान्न हवाईमार्गबाट ढुवानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । रसुवाको केरुङ नाकाबाट तिब्बत हुँदै हिल्सा आउनुपर्ने खाद्यान्न कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले नाका बन्द हुँदा ढुवानी गर्ने काम रोकिएर गाउँपालिकाले हवाईमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
गहुँ–जौको सट्टा सामूहिक स्याउखेती गरिने
२०७७ चैत ११ बुधबार, तातोपानी गााउँपालिका(जुम्ला)	जुम्लाको तातोपानी गााउँपालिकास्थित हिँयाखोलामा सामूूहिक स्याउखेती गरिने भएको छ । यसका लागि करिब १९ हेक्टर जमिनमा साढे पाँच हजार स्याउका बिरूवा रोपिएको छ ।
करेन्ट लगाउँदा माछा सखाप
२०७७ चैत ९ सोमबार, भैरवी गाउँपालिकाका(दैलेख)अवैध रूपमा करेन्ट लगाएर माछा मार्दा खोलामा माछा पाउन छोडिएको छ । लोपोन्मुख असला माछा अत्यधिक पाइने दैलेखको छामघाट र ताराघाट खोलामा अवैध रूपमा करेन्ट लगाएर माछा मार्न थालेपछि माछा पाउन छाडेको स्थानीयले बताएका छन् ।
२०७७ चैत ६ शुक्रबार, सिमकोट गाउँपालिका(हुम्ला)सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी रहेको देशको एकमात्रै जिल्ला सदरमुकाम हुम्लाको सिमकोट चालु आर्थिक वर्षमा पनि सडक सञ्जालमा नजोडिने भएको छ । सडक विभागका अनुसार अहिलेको गतिमा काम हुँदा सिमकोटमा सडक पुग्न अझ दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।
२०७७ चैत २ सोमबार(कर्णाली प्रदेश)कर्णाली प्रदेशका १०मध्ये पाँच जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)मा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ ।
गाउँपालिकाद्वारा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना
२०७७ चैत १ आइतबार, सिँजा गाउँपालिका(जुम्ला)जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाको नराकोटमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सर्वसाधारणलाई उपचार गर्न सहज भएको छ । गाउँमा धुलो र धुँवा हुने भएकाले आँखाका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
२०७७ फाल्गुण २८ शुक्रबार, पलाँता गाउँपालिका(कालीकोट)कालीकोटको दुर्गम ठाउँ पलाँता गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि भएको छ । सिटामोलसमेत नपाइने गाउँमा अहिले स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिन थालिएको हो ।
२०७७ फाल्गुण २७ बिहीबार, मुड्केचुला गाउँपालिका(डोल्पा)जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माण कार्यसँगै तल्लो डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले कृषकलाई स्याउका बिरुवा वितरण कार्य तीव्र बनाएको छ । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा ४० हजारभन्दा बढी स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
२०७७ फाल्गुण २१ शुक्रबार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका(सुर्खेत)पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले राजधानी सुर्खेतमा कालोपत्र गरिएका सडकको गुणस्तर जाँच शुरु गरेको छ । निर्देशनालयले कर्णालीमै पहिलोपटक कोरकोटर मेसिनले पक्की सडकको गुणस्तर मापन गर्न थालेको हो ।
२०७७ फाल्गुण ११ मंगलबार, छेडागाड नगरपालिका(जाजरकोट)आइतबार अपराह्न ३ः०० बजे छेडागाड नगरपालिका–१ का आठ वर्षीयादेखि १५ वर्षीया छात्रा जङ्गलमा हँसिया र नाम्लोसँगै भेटिए । सडककै छेउमा रहेको जङ्गलमा भेटिएका सबै छात्राले कक्षा ३ देखि ९ सम्म कालिका माध्यमिक विद्यालय सोडारीमा पढ्ने विद्यार्थी रहेको बताए ।
२०७७ फाल्गुण १० सोमबार, खत्याड गाउँपालिका(मुगु)‘ढुङ्गा खोज्दा देवता मिल्यो’ भने झैँ खत्याड गाउँपालिका–१० मुगु निवासी २९ वर्षीया निर्मला चँदाराको जीवनमा एउटा त्यही संयोग जु¥यो । प्रसव सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि तीन दिनअघि हवाईजहाजबाट नेपालगञ्ज जान उहाँ बाजुराको कोल्टी विमानस्थल पुग्नुभयो ।
सुनौला हजार दिनका आमालाई खानेपानीका फिल्टर वितरण
२०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार, नरहरिनाथ गाउँपालिक(कालीकोट)कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सुनौला हजार दिनका आमालाई खानेपानीका फिल्टर वितरण गरेको छ । ‘सुनौला हजार दिनका महिलासँग उपाध्यक्ष’ कार्यक्रम अन्तर्गत ६ महिनामुनिका बालबालिका भएका आमा तथा गर्भवतीलाई गाउँपालिकाले फिल्टर वितरण गरेको हो ।
वि.सं २०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार, (कर्णाली प्रदेश)विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी अझ सेलाएको छैन । कतिपय मुलुक त बन्दाबन्दीमै छन् ।
समृद्धितिर लम्कँदै चामुण्डाविन्द्रासैनी पालिका
माघ ३० शुक्रबार, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका( दैलेख)दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका पछिल्लो समय समृद्धितिर लम्किएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तिन वटै तहमा ठूलठूला नेता तथा कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको चामुण्डाविन्द्रासैनीमा पछिल्लो समय सडक, सञ्चार, विद्युत्लगायत आवश्यक पूर्वधार निर्माण भएपछि दिगो विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्किएको हो ।
माघ २९ बिहीबार, सिमकोट गाउँपालिका(हुम्ला)हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक तीन पटक चर्को विद्युत् भार कटौती हुन थालेपछि यहाँका महिलाहरूले आक्रोशित हुँदै विद्युत् कार्यालय घेराउ गरेका छन् । सिमकोटमा दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी विद्युत् भार कटौती हुँदा यहाँका सेवाग्राही आन्दोलित भएका हुन् ।
पुल वन्न ढिलाहुँदा कर्णाली नदी तर्न तुइनकै भर
माघ २७ मंगलबार, सर्केगाड गाउँपालिका(हुम्ला)सडक यातायातले हालसम्म नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हालसम्म यहाँका स्थानीयवासीलाई कर्णाली नदी तर्न तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौँदेखि स्थानीयवासीले नदीमा भोलुङ्गे पुल बनाउन अनुरोध गर्दा पनि कोही कसैबाट माग पूरा नहुँदा सर्केगाड गाउँपालिका–२ रिपगाउँका नागरिकले तुइन तर्नुपरेको हो ।
माघ ११, सर्केगाड गाउँपालिका(हुम्ला)हुम्लाको मध्यक्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिका–६ मा रहेको बराइ स्वास्थ्यचौकी झण्डै दुई महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीविहीन बनेको छ । सात कर्मचारीको दरबन्दी रहेको बराइ स्वास्थ्यचौकीमा एक कार्यालय सहयोगीको भरमा कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
प्रावीधिक स्टमेट विना ग्रामीण सडकको काम नगरौं भन्ने वडाअध्यक्षको टाउको फुटाइयोे
अदानचुली गाउँपालिका(हुम्ला)प्रावीधिक स्टमेट विना ग्रामीण सडकको काम नगरौं भन्ने राय राख्दै आएका अदानचुली गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष रंग थापाको टाउको फुटाइएकोछ । टाउको फुटाउनेमा प्रचण्ड–माधव समूहले आक्रमण गरेको वताइएको छ ।
पौष २६,गुठीचौर गाउँपालिका(जुम्ला)जुम्लामा कालिजपालन व्यवसाय शुरु गरिएको छ । पर्यटक प्रवद्र्धन, दीर्घकालीन व्यवसाय र उत्पादनका लागि गुठीचौर गाउँपालिका–४ बिगारे गाउँमा कालिजपालन शुरु गरिएको हो ।
पौष २२,महावै गाउँपालिका(कालिकोट)कालिकोटको महावै गाउँपालिकाले गाउँलाई खरको छानामुक्त बनाउने अभियान शुरु गरेको छ  । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न तथा खरको छानामा बस्ने परिवारलाई खरको छानामुक्त अभियान थालेको हो ।
धारामा बरफ जम्दा सशस्त्र प्रहरीलाई खानेपानीको समस्या
पौष २२,नाम्खा गाउँपालिका(हुम्ला)चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्सा नाका सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई खानेपानीको समस्या भएको छ । आइतबारदेखि लगातार भएको हिमपातले अत्यधिक चिसो भएर तापक्रम माइनसमा झरेका कारण खानेपानीका धारा बरफ जमेर पानी नआउने हुँदा पानीको अभाव देखिएको हो ।
पौष २०,कुशे गाउँपालिका(जाजरकोट)पुस्तौँदेखि जग्गा, जमिन र खास थातथलो नभएका बादी समुदाय पुसको चिसोले हैरान भएका छन् । नदीको किनारमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका हुन् वा मादल बनाएर बिक्री गरी आएको पैसाले परिवार पाल्ने बादी समुदाय किन नहुन्, सबैको पीडा चिसोबाट कसरी जोगिने भन्ने नै छ ।
पौष १९,सिमकोट गाउँपालिका(हुम्ला)हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा एसइई तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई बढी समस्या बनाएको छ । चर्को लोडसेडिङले आउने जेठमा एसइई तयारी गर्नका लागि सिमकोटमा ट्युसन पढ्न आएका विद्यार्थीसहित सदरमुकाम सिमकोटवासीको दैनिकीमा समस्या भएको छ ।
पौष १४, नाम्खा गाउँपालिका(हुम्ला)निर्माण कार्य शुरु गरेको करिब १० वर्षपछि बिजुली बलेपछि हुम्लाको उत्तरी गाउँका स्थानीय बासिन्दाले उज्यालो देख्न पाएका छन् । सिमकोट गाउँपालिका–८ स्थित खोल्सी तथा नाम्खा गाउँपालिका–३ का लामाखोल्सी, खगाल गाउँ र गुम्बाका गरेर २५० घरधुरीले सल्लाको दियालोबाट मुक्त भएर उज्यालो देख्न पाएका हुन् ।
पौष १२, भेरी नगरपालिका(जाजरकोट)वर्षेनी खाद्यान्न आयात गर्ने जजारकोटबाट अब खाद्यान्न निर्यात हुन थालेको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा यातायातको सहज पहुँच भएसँगै स्थानीय बासिन्दाले उत्पादन गरेका खाद्यान्न बाहिर जिल्लामा निर्यात गर्न थालिएको हो ।
पौष ९,सिमकोट गाउँपालिका (हुम्ला)उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा परम्परागतरूपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको रैथाने बालीको बजारीकरणसम्बन्धी पहल गरिने भएको छ । बुधबार सरोकारवाला निकायसँग कृषि विकास कार्यालयमा बसेको समन्वयात्मक बैठकले जिल्लामा लोपोन्मुख रैथाने बालीलगायत अन्य बालीको संरक्षण, उत्पादन र बजारीकरणका लागि छलफल गरिएको छ ।
पौष ८ ,चन्दननाथ नगरपालिका(जुम्ला)जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य यहाँ आई चन्दननाथ नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालसँग औपचारिक रूपमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर भगिनी स्थापना गर्नुभएको हो ।
पौष ६, ताँजाकोट गाउँपालिका(हुम्ला)दुर्गम मानिएको हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा प्रसूति सेवा सञ्चालनमा आएपछि सुत्केरी हुने महिलाका लागि सहज भएको छ । विकट गाउँमा प्रसूति सेवाका लागि भवन स्थापना भएर स्वास्थ्यकर्मी खटिएपछि यतिखेर यहाँका महिलालाई सहज भएको छ ।
बाढीपीडितलाई खाद्यान्न सहयोग
पौष २,शुभकालिका गाउँपलिका(कालिकोट)कालिकोटको शुभकालिका गाउँपलिकाले बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेको छ । गत साउन र भदौमा आएको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण गरेको हो ।
मङ्सिर २५,सिमकोट गाउँपालिका(हुम्ला)हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयसँग १८ हजार स्याउका बिरुवा माग गरेको छ । हुम्लामा व्यावसायिक स्याउखेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि गाउँपालिकाले ठूलो सङ्ख्यामा प्रदेश सरकारसँग स्याउका बिरुवा माग गरेको हो ।
मङ्सिर १९, बारेकोट गाउँपालिका (जाजरकोट)सात स्थानीय तह रहेको जाजरकोटमा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको बारेकोटले सबै स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा उछिनेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आधार बनाई गरिएको समीक्षामा अन्य पालिकालाई उछिन्दै बारेकोट एक नम्बरमा आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
मङ्सिर १६,सिमकोट गाउँपालिका(हुम्ला)हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–३ बरगाउँका अतिविपन्न तथा दलित समुदायका घरपरिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ । सोही वडाका तोर्पागाउँका पे्रमदोर्जे लामाकोे व्यक्तिगत सहयोग तथा छिरिनपाल्देन लामाको सहकार्यमा खाद्यान्न वितरण गरिएको हो ।
मङ्सिर ११,पलाँता गाउँपालिका(कालिकोट)कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–७ थिर्पुमा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव भएको छ । निःशुल्क वितरण हुने औषधि खरिदका विषयमा गाउँपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा सिटामोलसमेत अभाव भएको हो ।
मङ्सिर १०,जुम्ला - सरकारले देशका विभिन्न स्थानका संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईँसहितको समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले गत जेठ १५ गतेदेखि सामुदायिक वनको अधिकार खुम्च्याएकोले पैरवीस्वरुप आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिएको छ ।
मङ्सिर ७, जाजरकोट - भेरी करिडोरअन्तर्गत छेडा– खलङ्गामा दर्जन पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै यात्रामा सहजता आएको छ ।
मङ्सिर ६, कर्णाली - सरकारले अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान शुरुआत गरेको छ । प्रशासनले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता/नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।
कार्तिक २७,सुर्खेत - जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको उद्योग दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देश गरेको हो ।
कार्तिक १८, नलगाड नगरपालिका(जाजरकोट) नलगाड नगरपालिकाले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सबै वडामा स्वस्थ्य संस्था निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ७, ११, १२ र १३ मा पहिले नै स्वास्थ्य संस्था थिए ।
कार्तिक १७, नलगाड नगरपालिका (जाजरकोट)नलगाड नगरपालिकाले कृषकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अभियान थालेको छ । नगरभित्र रहेका कृषकको मागका आधारमा विभिन्न औजार तथा उपकरण वितरण कार्य शुरु गरिएको छ ।
सरकार कम्युनिष्टको : गरीवलाई चिन्ता भोकको ?
कार्तिक १७, नाम्खा गाउँपालिका(हुम्ला) हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिउँ पर्ने याम शुरु भएसँगै जिल्लाका स्थानीयवासीलाई खाद्य सङ्कटको चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । विशेषगरी हिमालपारिको गाउँ भनेर चिनिने उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीका नागरिकलाई यो वर्ष नेपाल र चीनको सीमा नाका बन्द भएपछि खाद्यान्नको समस्या हुने देखिएको छ ।
कार्तिक १६, (हुम्ला) हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा असोज महिनाबाट पुनः कालोपत्र गर्ने कार्य चलिरहेको छ । गत असोज महिनाको १५ गतेबाट विमानस्थलको रनवे क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने कार्य अहिले पनि जारी छ ।
कार्तिक १६, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका(डोल्पा) चिसो मौसम, गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न तीन दिन लाग्छ । पर्याप्त भौतिक पूर्वधारदेखि अन्य सामग्री पाउन फलामको चिउरा चपाएझैँ हुन्छ तर बाध्यता र विवशताको बीचमा सबै कुरा नपुगे पनि पुगेझैँ गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो भनाइ हो– डोल्पा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ स्थित तापिरिचा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्याम शर्माको ।
कात्तिक १५, हिमा गाउँपालिका(जुम्ला) जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले डिजिटल एकिकृत सम्पत्ति कर प्रणाली शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले विशेषगरी सम्पत्ति कर सङ्कलन गर्न यो प्रणाली लागू गरेको हो ।
कार्तिक १४, सिमकोट गाउँपालिका(हुम्ला) हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका–४ मा रहेको चेला र सिङमच्छिउ सामुदायिक वनमा बिहीबार दिउँसो भीषण आगलागी भएको छ । चेला वनबाट शुरु भएको आगो सिङमच्छिउ सामुदायिक वन हुँदै बल्देजुडासम्म पुगेको त्यहाँका स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
देवकुमार सुवेदी द्धारा दशैंँभत्ता आश्रमलाई
कार्तिक १३, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका(सुर्खेत) सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले दशैंँभत्ताका रुपमा आफूलाई प्राप्त रकम मानव सेवा आश्रमलाई दिनुभएको छ । नगर प्रमुख सुवेदीले भत्तावापत पाउनुभएको रु १५ हजार आश्रमलाई प्रदान गर्नुभएको हो ।
कार्तिक १३, नाम्खा गाउँपालिका(हुम्ला) हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाले आजदेखि विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरेको छ । झण्डै सात महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा प्रभाव परेकाले अभिभावकको दबाबपछि पठनपाठन शुरु गरिएको हो ।
कार्तिक ७, चन्दननाथ नगरपालिका(जुम्ला) चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रका १० वटै वडाका बेरोजगार युवाहरुले रोजगारीको बाटो रोज्ने प्रतिबद्धता गरेका छन । बेरोजगार भई भौँतारिएका युवहाहरुले मेयर रोजगार कार्यक्रममार्फत जीवनोपयोगी सीप सिकेको भन्दै व्यवसायी भएर क्षमता देखाउने प्रतिबद्धता गरेका हुन ।
कार्तिक ६, लेकवेशी नगरपालिका(सुर्खेत)सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका १० बडीपाटीका भरतराज शर्माको निजी स्वामित्वमा रहेको करिब डेढ बिगाहा जग्गामा वन क्षेत्र फैलिएको छ । वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनमा शर्मा परिवारले लाभ लिन पाएको छैन ।
असोज २६, तातोपानी गाउँपालिका (जुम्ला)संसारको सबैभन्दा उच्च भागमा फल्ने अन्नबाली कालीमार्सी धान समुद्री सतहदेखि दुई हजार ८५० मिटर उचाइको भूमि जुम्लामा मात्र फल्ने गर्दछ । मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिने यो अन्नबाली केही समययतादेखि नेपाली बजारको आकर्षण पनि बनेको छ ।
असोज २३, जाजरकोटजाजरकोटका स्थानीय तहका प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्मले टेलिफोन सेवा सुधार गर्न निरन्तर आग्रह गरिरहँदापनि जाजरकोटको टेलिफोन सेवा बन्द भएको महिना दिन बिात्दासम्म सञ्चालन हुनसकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटले सातै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका मताहातमा रहेका कार्यालयको प्रगति समीक्षामा समेत टेलिफोन सेवाकै मुद्दा प्रमुख बनाएर कुरा उठाए ।
असोज २२, हीमा गाउँपालिका (जुम्ला)प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा दुई हजार १६५ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि हिमा गाउँपालिकामा ती व्यक्ति रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा सूचीकृत भएका हुन् ।
असोज २२, पातारासी गाउँपालिका (जुम्ला)जुम्ला पातारासी गाउँपालिका –७ का बासिन्दा रातो हाब्रे संरक्षणमा जुटेका छन् । दिनप्रतिदिन वनजङ्गल विनाश हुँदै गइरहेको र चोरी शिकार बढिरहेकाले उनीहरु रेड पाण्डा संरक्षणमा जुटेका हुन् ।
असोज २१, जाजरकोटशुरुका वर्षमा सडकलाई प्राथमिकता दिने स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय आफ्ना प्राथमिकताहरु परिवर्तन गरेका छन् । स्थानीय तहले पछिल्ला वर्षमा स्थानीयवासीलाई रोजगारीदेखि स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई प्राथमिकता राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको देखिएको छ ।
असोज १७ , लेकबेँसी नगरपालिका(सुर्खेत)महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर ओरालो लागिरहेका बेला सुर्खेतको एक सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका–९ साटाखानीस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले कोरोना प्रभावित शेयर सदस्यलाई आयआर्जन र उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले ऋणको ब्याजमा भारी छुटको घोषणा गरेको हो ।
असोज १४, नाम्खा गाउँपालिका (हुम्ला)हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीमा सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नाम्खा–६ मा पर्ने लिमी लाप्चामा सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना हुने भएको छ ।
असोज ११नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्रकाशन अब सातै प्रदेशमा पुग्ने भएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आफ्ना प्रकाशन मुलुकका सातै प्रदेश र विदेशमा बिक्री वितरण कार्य गर्न सक्ने सञ्जाल बनाएको छ ।
असोज ८, कर्णाली – कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन हजार २७६ पुगेको छ ।
भदौ ३१, तातोपानी गाउँपालिका (जुम्ला)जुम्ली मार्सी धानबालीमा ब्राउन स्टोप रोगको प्रकोप देखिन थालेपछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । यस वर्ष अनुकूल मौसम परेकाले समयमै मार्सी धान रोप्न पाएपछि हर्षित बनेका किसान रोग देखिन थालेपछि चिन्तित बनेका हुन् ।
भदौ २३, डोल्पा - शहर र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बालबालिकाले १२ महिना खोप पाए पनि उपल्लो डोल्पाका बालबालिकाले मुस्किलले छ महिना खोप पाउने गरेका छन् । भौगोलिक विकटता र अत्यधिक चिसोका कारण उपल्लो डोल्पाका चार स्थानीय तहका बालबालिकाले छ महिना खोपविहीन बन्नुपरेको हो ।
भदौ ९, जाजरकोट - दैनिक सिमसिम पानी बर्सिन नछाड्दा बारेकोट गाउँपालिकामा सग्ला घर भकाभक भत्किन थालेका छन् । बाढीपहिराबाट थिलथिलो भएको भूभागमा निरन्तर पानी पर्दा सद्दे घर पनि भत्किँदा दैनिक त्रिपालको बास बस्नेहरुको सङ्ख्या बढेको बारेकोटका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो ।
घरआँगनमै स्थानीय सरकार : दुःख, सुखको साथी
भदौ ६ ,जाजरकोट - गाउँमा सामान्य खालका घटना हुने बित्तिकै सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारको गठनसँगै अन्त्य भएको छ । सबै नागरिकको दुःख, सुखको साथी मात्र नभई आस भरोसाको केन्द्रविन्दुसमेत स्थानीय सरकार बन्दै गएका छन् ।
भदौ १, जुम्ला - जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा चन्दननाथ नगरपालिकासहित जिल्लाका तातोपानी, हिमा, सिञ्जा गुठीचौर र कनकासुन्दरी गाउँपालिमा पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले नगरपालिकासहित स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
साउन ३०,वीरेन्द्रनगर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता हुने अधिकांश उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका एक हजार ८० उजुरीमध्ये ५५४ मुद्दा स्थानीय तहका रहेका छन् ।
साउन २८,जाजरकोट - भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका यादव विकलाई दल्लीमा आफन्त पुर्याउन जाँदा बाँके खोलामा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । खोलामा एक्लै मोटरसाइकल लैजान नसक्दा उहाँले रु एक हजार दिएर स्थानीयवासीको सहयोगमा खोला तारेर दल्ली गएको बताउनुभयो ।
साउन २७, टीकापुर - कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटीय क्षेत्रमा त्रास शुरु भएको छ । सोमबार दिउँसो १ः३० बजेकोे रेकर्डअनुसार कर्णाली नदीमा पानीको सतह १० मिटर १६ सेन्टिमिटर पुगेको छ ।
﻿साउन २६, जाजरकोट – कुशे गाउँपालिका पैँकका महेन्द्र शाही आफ्नो गाउँमा फोन नलाग्दा दैनिक हैरान हुनुहुन्छ । सदरमुकाम बसेर गाउँमा आफन्तसँग मोबाइलमार्फत फोन सम्पर्क गर्न नसक्दा शाहीलाई पीडा थामिनसक्नुभएको छ ।
साउन २५, जुम्ला – अविरल वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको दैलेखको आठबिस नगरपालिका–५ घट्टेखोलामा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।
साउन २५, जुम्ला - जुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट जिल्ला जोड्ने दानसाँघु पक्की पुल नौ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ । विसं २०६८ असारदेखि निर्माणकार्य थालनी गरिएको ६० मिटरको सो पुल २०७१ असारमा निर्माण सम्पन्न सम्झौता भए पनि २०७७ असारमा सम्पन्न भएको हो ।
साउन २३, हुम्ला – सिमकोट गाउँपालिका–१ देखि ८ वडासम्मका प्राविदेखि माविसम्मका २४ विद्यालय बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । कोरोना भाइरस हुम्ला जिल्लामा नदेखिएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन् ।
सरकारी रकम श्रीमती र भतिजको खातामा राख्दा
साउन २३,रुकुम - सरकारी रकम आफ्नो, श्रीमती र भतिजाको खातामा जम्मा गर्ने एक गाउँपालिकाका लेखापालसहित चार जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा त्रिवेणी गाउँपालिकाका लेखापाल हेमन्त केसी, लेखा सहयोगी तथा लेखापालका सहोदर भतिजा सुवास केसी, भाइ विकास र अर्का भतिजा भीमसेन रहेका छन् ।
साउन २३, जाजरकोट – जङ्गलभित्र त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका बारेकोट गाउँपालिका–४, ५ र ६ का पहिरो पीडितको न गतिलो बास छ, न त खाने अन्न । गत असार २५ गते सो स्थानमा आएको पहिरोले १२ जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो ।
साउन २२, खलङ्गा –जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा दतिल बस्तीका २५० घरपरिवारले नयाँ घर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति गरिब र पिछडिएका वर्ग तथा दलित समुदायका लागि भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्माण गरिदिएको हो ।
साउन २२, कर्णाली – नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदूरको ज्यालामा हेरफेर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको समितिले बजार महँगी बढ्दै गएपछि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको पारिश्रमिक बढाएको हो ।
साउन २१, जुम्ला – अविरल वर्षाका कारण एक सातादेखिको अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुलेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीका अनुसार साउन १३ गते खसेको पहिरो पन्छाइएपछि राजमार्ग खुलेको हो ।
बर्सेनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दर बढ्दो
साउन २०, कर्णाली – कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दर बर्सेनी बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय (अदुअवा) सुर्खेतले बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्ष सङ्ख्यात्मक रूपले घटेको देखिए पनि उजुरी आउने दर भने उच्च रहेको जनाएको छ ।
साउन १६, सल्यान – शीतलपाटीमा रहेको ३३ केभी सबस्टेशनमा आगलागी हुँदा मङ्गलबारदेखि दुई जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । सबस्टेशनमा जोडिएको केबुल आगो लागेर जलेपछि सल्यान र रुकुम–पश्चिममा विद्युत् सेवा बन्द भएको छ ।
साउन १५, सुर्खेत – सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका– १३ ठूलो करेलीका मकैबालीमा सलह कीराले क्षति पु¥याएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । बाली भित्र्याउने बेलामा सलहको बथानले नोक्सान पारेपछि किसानहरुलाई यस वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने चिन्ता परेको छ ।
साउन १३, सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सलह प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । केसी सहित नेकपा कर्णाली प्रदेशका सचेतक सीता नेपाली, कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकाय, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले सोमबार भेरीगङ्गा नगरपालिका–१३ सुर्खेत रामघाटमा मकै तथा भटमास बालीमा सलहले पारेको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको हो ।
श्रावन १२, सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो २४ घण्टामा ८ जना बालबालिकासहित ३१ जना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का संक्रमित थपिएका छन् । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, दैलेख अस्पतालको प्रयोगशाला र चौरजहारी नगरपालिकाको प्रयोगशाला रुकुम पश्चिममा गरिएको परीक्षणबाट सोमबार थप ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
साउन १०, जुम्ला - जुम्लाका आठ स्थानीय तहको रु ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहको रु ३० करोड १५ लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
असार २४ ,सल्यान - सल्यानमा सिँचाई तथा कृषि सडकमा विशेष जोड दिएको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्देश्यले सिँचाई तथा कृषि सडकमा विशेष जोड दिएको हो ।
आषाढ २३,(कर्णाली प्रदेश) -कर्णालीप्रदेशसरकारअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय दैलेखले किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनतर्फ अग्रसर बनाउने अभियान शुरु गरेको छ । परम्परागतरुपमा पशुपालन गर्दै आएका नारायण नगरपालिकाका किसानलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा १२० भैँसी वितरण शुरु गरिएको छ ।
असार १७, मुसीकोट नगरपालिका(रुकुमपश्चिम) - रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–११ का नरीभान कामी काठको ठेकी बनाउन सिकिरहनुभएको छ । दूधबाट दही बनाउन प्रयोग हुने काठको ठेकी बनाउने सीप सिक्न उहाँ केही दिनदेखि व्यस्त हुनुहुन्छ ।
जेष्ठ ३१, जुम्ला - जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । यहाँको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकामा रु ६४ लाखका दरले रु पाँच करोड रकम बेरोजगार तथा कोभिड –१९ बाट प्रभावितलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको लागि : २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन
जेठ २०, काठमाडौं - उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगारी र आयको वितरणलाई तत्काल टेवा पु¥याउने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रूपमा अथाह सम्भावना वोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई मैले जोड दिएको छ’ । नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विश्व वजारमा स्थापित गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सञ्चालन गरिनेछ ।
तस्वीर : प्रेम चौंलागाई,कालीकोट
वैशाख ३१ ,कालिकोट - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कालिकोटले पलाँता गाउँपालिकामा भएको कुटपिटको घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । सडक निर्माणको बिषयमा विवाद हुँदा गाउँपालिका अध्यक्ष र पार्टीका नेताहरुबीच भएको कुटपिटको घटनाको छानबिन गर्नका लागि नेकपाले छानबिन समिति बनाएको हो ।
वैशाख १५,काठमाडौं - लकडाउनलाई थप कडा पार्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोमबार परिपत्र गर्दै पासविनाका कुनै पनि सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैशाख २, काठमाडौं - भारतमा लकडाउनको अवधि बैशाख २१ गतेसम्मका लागि थपिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशबासीलाई मंगलबार सम्बोधनको क्रममा लकडाउनको म्याद मई ३ अर्थात वैशाख २१ गतेसम्म १९ दिनको लागि थपिएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले हेलिकोप्टर कम्पनीलाई भन्यो– तयारी अवस्थामा बस्नू
बैशाख २, काठमाडौं - सरकारले दश निजी वायुसेवा कम्पनीका ३३ वटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्न परिपत्र गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले जुनसुकै वेला उद्धारमा खटिनुपर्ने हुन सक्ने भन्दै हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्न परिपत्र गरेको हो ।
चैत २०,सिमकोट- हिमाल पारिको गाउँ लिमीका बासिन्दाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सन्त्रासबाट पूरै गाउँलाई जोगाउन बाहिरी सम्पर्कबाट अलग गराएका छन्  । अहिलेको आधुनिक सञ्चार प्रविधिको युगमा पनि नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी गाउँ यो प्रविधिको पहुँचमा छैन  ।
चैत्र १९,काठमाडौं - विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
चैत १३,पोखरा/बागलुङ - अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा रहेका पर्यटकहरुलाई स्वदेश फर्काउने पहल थालिएको छ । सम्बन्धित देशका दूतावासहरुले नै आफ्ना नागरिकबारे चासो राखेपछि स्थानीय प्रशासन र ट्रेकिङ एजेन्सिज अफ नेपाल (टान) सँगको समन्वयमा उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन लागिएको हो ।
भक्तपुर, ६ चैत -जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावल माथि सोही गाउँपालिका–२ का ६० वर्षीय देवीकृष्ण शर्माले कुटपिट गर्नुभएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दका अनुसार आफ्नै कार्यकक्षमा फोन गरिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष रावलमाथि शर्माले लठ्ठी प्रहार गरी हालै कुटपिट गर्नुभएको हो ।
भक्तपुर, ३ फागुन - कालीकोट जिल्ला पलाता गाँउपालिका वडा नं २ स्थीत बानजडमा ३०० घरधनीले एउटै धाराबाट खानेपानी लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । परम्पराकालदेखि एउटै धारोमा पानी खाएर आएका पलाता गाँउपालिकाका स्थानीय बाँसीले, अहिले सिंहदरवार गाँउमा आउदा पनि खानेपानीको बिषयमा कुनै किसिमको सहज नभएको धारोमा लाईन लागेर पानी थाप्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउन्छन ।
भक्तपुर, ३ फागुन -सडक छेउमा रहेका अनावश्यक बिजुलीका तारले कुरुप देखिएको भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ताररहित नगरपालिका बनाउने भएको छ । आगामी असार महिनासम्म ताररहित बनाएर सुन्दर नगरिको रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बरेङ गाउँपालिकाद्धारा ‘एक घर एक महिला रोजगार’ कार्यक्रम
भक्तपुरु, ३ फागुन -बरेङ गाउँपालिकाले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘एक घर एक महिला रोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । लघुउद्यममार्फत स्वरोजगारमा महिलालाई जोडेर उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर बनाउन सो कार्यक्रम लागू गरेको सो पालिकाअध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
भक्तपुर २ चैत्र- कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासका कारण प्रदेश पनि श्रम स्वीकृति बन्द भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति स्थगित गरेपछि प्रदेशबाट पनि श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
भक्तपुर, १ चैत -कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि दुईलाख रुपैयाँसम्मको प्राकृतिक विपत् दुर्घटना बिमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । चैत्र १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।
भक्तपुर, ३० फागुन -कर्णाली प्रदेशकाे कालिकोट जिल्ला अन्र्तगत सान्नी त्रिवेणि गाँउपालिका वडा न ८ साबिक मुम्रा गा.वि.सका एक यूवकले आर के नेपाली हाते कागज नामक संस्था खोलेर व्यावसायिक रुपमा काम गदै आएका छन । कालीकोट जिल्ला को कच्चा प्रर्दाथ भएपनि यो कच्चा प्रर्दाथ लाई बाजुराका एक व्यावसायी ऐन बहादुर शाहिले यसकाे हाते कागजमा काम गदै आएका छन ।
भक्तपुर, २९ फागुन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-कूल ३० टन क्षमताको परियोजनाबाट दैनिक ७२० केजी प्रशोधित बायोग्यास तथा नौ मेट्रिक टन जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादित ग्यासलाई पाइपलाइनमार्फत वितरण गरिनेछ ।
भक्तपुर, २८ फागुन -प्रदेश मताहात रहेका कार्यालयले अघिल्लो वर्ष जिल्लामा गरेका कामको अनुगमन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सोमबार र मंगलबार अनुगमन गरेको हो ।
भक्तपुर, २३ फागुन -ग्रामीण क्षेत्रमा हुने विभिन्न खाले आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा अन्य सामाजिक कार्यका लागि दैलेखका दुईओटा स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिने भएको छ । जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका र ठाटीकाँध गाउँपालिकामा ‘हेलिप्याड’ बन्ने भएको हो ।
भक्तपुर, २३ फागुन -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षले घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जाजरकोट जुनीचाँदे गाउाँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र ५ का वडाअध्यक्ष राजहादुर शाहीविरुद्ध २५ लाख ५० हजार बिगो कागम गरी आरेपपत्र दर्ता गरेको हो ।
चिकित्सकको टोली हेलिकोप्टरबाट डोल्पाको रोग प्रभावित गाउँ पुग्यो
फाल्गुण २१,त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका (डोल्पा) डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ मा फैलिएको अज्ञात रोगको नमूना परीक्षाणका लागि चिकित्सकसहितको टोली हेलिकोप्टरबाट करेलीकाँडा पुगेको छ । रोग प्रभावित क्षेत्रका सबैको नमूना परीक्षाणका लागि रगत, र्‍याल, खकार, दिसा, पिसाबलगायतका स्याम्पल संकलनका लागि प्रदेश अस्पतालका डाक्टर इन्द्रबहादुर थापा र ल्याब टेक्निसीयन कमलकुमार थापा सेनाको हेलिकप्टरमा भर्खरै प्रकोप क्षेत्रमा पुगेका छन् ।
भक्तपुर, २० फागुन – डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ को करेलीकाँडा गाँउका ३५ जनाभन्दा बढी एकैपटक बिरामी भएपछि नगरपालिकाले स्वास्थ्य प्राविधिकसहितको टोली उक्त क्षेत्रमा पठाएको छ । मुकुटेश्वर हिमालमुनि रहेको गाँउका ३५ जनामा रुघाखोकी, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने समस्या देखिएपछि औषधिसहित स्वास्थ्य प्राविधिकको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको नगर प्रमुख ओमबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
भक्तपुर, १८ फागुन-कर्णालीका स्थानीय तहले गाउँगाउँमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार जुम्लाका दुई स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
भक्तपुर, १५ फागुन- जिल्लाको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका ५ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीसहित ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर भएको छ । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका-५ स्थित पिपलचौतारा माविको राहत दरबन्दीमा निमावी तहको सामाजिक विषयको शिक्षक पदपूर्तिका लागि गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिएको शिक्षक छनौट परीक्षामा गोपनीयता भंग गरी आफ्ना निकटलाई उत्तीर्ण गराएर अनियमितता गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि वडाअध्यक्षसहित चारविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
भक्तपुर, १५ फागुन -पूर्वी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र दल्लीमा १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण सुरु भएको छ । “स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी परिपूर्ति गर्नका लागि नगरपालिकाले विज्ञापन गरिसकेको छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले भने ।
भक्तपुर, १३ फागुन-साघुँरो सडक, नागरिकको असहयोग, स्थानीयको लापरर्बा्हि तथा चेतनाको अभाव लगायत आन्तरिक प्राविधिक कठिनाई नगरपालिकाका विपद व्यवस्थापनका मुख्य बाधक हुन् । जुम्लाको एक मात्र नगरपालिका चन्दननाथका १० वडामा आगलागी हुँदा दमकल जाने फराकिले बाटो छैन् ।
भक्तपुर, १३ फागुन -गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित बन्यो । रोजगारी दिने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी लगानी खेर फालिएको भन्दै कार्यक्रम बद्नाम भयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षका १३ भैंसी, दूध बेचेरै मासिक ५० हजार
फाल्गुण १२,त्रिवेणी गाउँपालिका(सल्यान) जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा खड्कालाई जनप्रतिनिधि भएपछि पनि भैंसी मोहले छोडेन । आफूलाई जनप्रतिनिधिभन्दा पनि कृषक भन्न रुचाउने ३५ वर्षीया उपाध्यक्ष खड्काले जनप्रतिनिधि भएपछि पनि पुरानै पेसा छोड्न सकिनन् ।
भक्तपुर, ११ फागुन - अस्पताल सञ्चालन (सानीभेरी गाउँपालिका ) रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले वडा नं. ७ छोटेबगरमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
भक्तपुर, ११ फागुन - विकास खर्च (कर्णाली प्रदेश)कर्णालीमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटमध्ये ७ महिनामा जम्मा ७० करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
भक्तपुर, ९ फागुन - घुस (भेरीगंगा नगरपालिका) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले भेरीगंगा नगरपालिकाका प्राविधिक चित्रबहादुर केसीलाई २ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ । भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मदानेचौरस्थित किराना पसल अगाडिबाट केसीलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार सुर्खेतका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
भक्तपुर, ९ फागुन - कृषिमा जागरण (कर्णाली प्रदेश) प्रथम कर्णाली जैविक कृषि सम्मेलन २०७६ मा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले कर्णालीलाई पूर्ण जैविक बनाउन कृषिमा आम जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक प्रथम कर्णाली जैविक कृषि सम्मेलन २०७६ मा भाग लिँदै सहभागीहरुले कर्णालीलाई पूर्ण जैविक बनाउन आम नागरिकमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गनुृभयो ।
मान्छे हेरेर गाडी भाडा निर्धारण !
फागुन ९, खलङ्गा - सडक यातायात पुगेपछि सहजताका साथ यात्रा गर्ने सपना देखेका यहाँका नागरिक चर्को भाडा तिर्न परेपछि निराश भएका छन् । जोखिमपूर्ण यात्राका साथैै व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुल्दा विपन्न नागरिकलाई गाडी चढ्नै समस्या भएको छ ।